समाचार Archives - Page2of 38 - Everest Media News
साउथका यी चर्चित नायकले सडक दुर्घटनामा गुमाए पिता (दुर्घटनाका तस्बिर सहित)
साउथका चर्चित नायक जुनियर एनटीआरका पिताको सडक दुर्घटनामा निधन भएको छ । कुनै समयका नायक समेत रहेका नंदमुरी हरिकृष्णाको दुर्घटनामा घाईते भएका उनको उपचारको क्रममा निधन भएको हो । प्रहरीका अनुहार... Read more
काठमाडौँ, १० भदौ प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा मनाइने उपाकर्म, ऋषितर्पणी र रक्षाबन्धन आज विधिपूर्वक स्नान, ऋषि तर्पण र हातमा डोरो बाँधी मनाइँदैछ । सत्ययुगमा दानवद्वारा लखेटिएका... Read more
३७ लागिन् रेखा , जान्नुस उनका रोचक किस्सा…….
नेपाली सिनेमा क्षेत्रकी कन्ट्रोर्सी क्विन रेखा थापाको आज जन्मदिन परेको छ । पिता प्रेम थापा र माता सरस्वती थापाको कोखबाट भदौ ५ मा मोरङमा जन्मिएकी रेखा आजबाट ३७ बर्षमा प्रबेश गरेकीछिन् । मोडलि... Read more
चट्याङ, अग्नि र सर्पको भयबाट बच्न अाज नागपूजा गरिँदै….
प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने नागपञ्चमी पर्व बिहीबार परम्पराअनुसार घरका मूलढोकामा नागको तस्बिर टाँसी पूजा अर्चना गरेर मनाइँदै छ । यसरी नागको तस्बिर टाँस्दा वर्षभर घरमा नाग,... Read more
जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर…..
बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किए नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ रुकुममा जीवित प्रमाणित गर्न कर बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने... Read more
आज साउनको अन्तिम सोमबार, देशभरका शिवालयमा घुइँचो…..
२८ साउन, काठमाडौं । आज साउन महिनाको अन्तिम सोमबार, पशुपतिनाथसहित देशभरका शिवालयहरुमा श्रद्धालुहरुको भिड लागेको छ । साउन महिनाको हरेक सोमबार ब्रत बसेर शिवको पूजा गर्दै आएका महिलाहरुले आज विधि... Read more
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले निशान खड्काको अपहरणमा संलग्न दुई व्यक्तिको प्रहरी इन्काउण्टरमा मारिएको घटनाबारे सरकारले छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्यव्यवस्था... Read more
जनजाति आन्दोलन ओरालो लागेकै हो ?
२४ साउन, काठमाडौं । आदिवासी जनजाति महासंघ लगायतका संघ/संस्थाद्वारा १९ साउनमा आयोजित ‘वृहत राष्ट्रिय राजनीतिक सम्मेलन’मा करिव चार-पाँच सयको उपस्थिति देखेपछि डा. मुक्तसिंह लामाले भने, ‘यो उपस्... Read more
डा.केसीले फेरि किन बोलाए पत्रकार सम्मेलन ?पढ्नुहोस पुरा……
अनशन तोडेर १३ दिनअघि अस्पताल भर्ना भएका डा. गोविन्द केसी आज डिस्चार्ज हुँदैछन् ।६ दिन लामो आसीयूको बसाइ र एकसाता अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराएका डा। केसीको स्वास्थ्यमा पूर्ण सुधार आएपछि आज अ... Read more